Ukhenketho lwezoMveliso-iKimpok Technology Co, Ltd.
1. Umgangatho ophezulu, amaxabiso asezantsi
Isibonelelo esaziwayo sokuthengisa ngokuthe ngqo kukubanakho ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso asezantsi. Xa uthenga ku-Kimpok, akufuneki ubencame ukusebenza ngexabiso. Abathengi bethu bamane bafumana ngaphezulu, kokuncinci.
2. Inkxaso yolwazi
Sithatha inkxaso yezobugcisa kakhulu. Ngapha koko, uKimpok usebenzisa abasebenzi abaninzi bezobugcisa njengoko sisenza abathengisi. Ukuthenga kuKimpok kubonelela ngokufikelela ngokuthe ngqo kwiqela lethu leengcali ezibandakanyekayo kuyo yonke into yophuhliso lwemveliso-ukusuka kuyilo novavanyo, ukuxhasa.
3. Ukuqiniseka okuqinisekileyo
Ukuba imveliso iyasilela ukujongana nolindelo lwabathengi, seva malunga nayo - ngokuthe ngqo kubathengi bethu, kwaye senza naluphi na uhlengahlengiso oluyimfuneko ukuzisa amava afanelekileyo. Le ngxelo ngqo, idityaniswe nolawulo lophuhliso lwemveliso, ixhobisa uKimpok ukuba bakhe izisombululo ezinokuthenjwa, ezixhaswe lishishini elikhokela iiwaranti kunye nenkxaso yezobugcisa yasimahla engenasiphelo. Ukubeka ngokulula-simele iimveliso zethu.
4. Uyilo oluqhutywa ngumthengi
Ingxelo ngokuthe ngqo evela kubathengi bethu inefuthe elikhulu kuphuhliso lwemveliso-ukusuka ekusebenzeni ukuya kusetyenziso- kwaye ivumela iKimpok ukuba iphendule kwiimfuno zentengiso. I-Kimpok ikwazile ukwenza ngokwezifiso izisombululo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu-amandla okwenziwa kobudlelwane ngqo.
5. Itekhnoloji yamva nje
Ubudlelwane ngokuthe ngqo kunye nabathengi bethu ivumela uKimpok ukuba aqonde ngcono iimfuno zeemveliso zethu, kunye nokungenisa iimveliso ezintsha njengoko zikhoyo. Ezi zibonelelo ziluncedo ekuqinisekiseni ukuba sinezisombululo ozifunayo, xa uzifuna- ngelixa abakhuphiswano bethu besakhuthaza itekhnoloji izolo.
6. Uxolo lwengqondo
Ekugqibeleni, uthengela izixhobo zokhuseleko uxolo olukhulu lwengqondo. Ukuba ujonge umgangatho ophezulu, ubuchwephesha bamuva, ukuthembeka okungathethekiyo, kunye nenkxaso efanelekileyo, iKimpok ihambisa - ngexabiso eliphantsi kunokhuphiswano lwethu. Sibe ngumnikezeli othembekileyo wezisombululo zokhuseleko lwevidiyo ngaphezulu kweminyaka engama-20, kwaye siza kuba lapha kwiminyaka ezayo.
We Kimpok Technology Co, sinikwe iinkonzo ze-OEM / ODM ze I-COFDM Transmitter, umamkeli we-COFDM, i-IP Mesh kunye nenkqubo ye-videography engenacingo. Ngetekhnoloji yethu ye-COFDM enobuchule kunye namava atyebileyo sinokunikezela ngezifiso ezizodwa eziza kwenza imveliso yakho ibonakale kwabanye. NgeZisombululo ze-OEM / ODM zika-Kimpok unokuqiniseka ukuba ufumana iimveliso ezizezona zilungileyo kwishishini lakho.
1. Isisombululo esinye se-ODM / i-OEM;
2. Inkxaso yezobugcisa iiyure ezingama-24;
3. Ulondolozo lobomi bonke (Iindawo zokufaka ezinye ziya kuhlawuliswa emva konyaka);
4. Nikeza uyilo lwenkqubo yobungcali nolwakhiwo;
5. Uya kufumana ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu apha kuba singabavelisi abanamava kwindawo yokuhambisa ngocingo i-microwave ukusukela ngo-1998, singumthombo.